Cryptokenz စျေး - အွန်လိုင်း CYT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Cryptokenz (CYT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Cryptokenz (CYT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Cryptokenz ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Cryptokenz တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Cryptokenz များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CryptokenzCYT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.35CryptokenzCYT သို့ ယူရိုEUR€1.14CryptokenzCYT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.03CryptokenzCYT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.23CryptokenzCYT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr11.99CryptokenzCYT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.8.48CryptokenzCYT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč29.71CryptokenzCYT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł5.01CryptokenzCYT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$1.79CryptokenzCYT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$1.88CryptokenzCYT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$29.67CryptokenzCYT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$10.45CryptokenzCYT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$7.31CryptokenzCYT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹100.96CryptokenzCYT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.227.73CryptokenzCYT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$1.85CryptokenzCYT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.06CryptokenzCYT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿41.98CryptokenzCYT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥9.37CryptokenzCYT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥143.77CryptokenzCYT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1601.08CryptokenzCYT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦520.95CryptokenzCYT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽98.25CryptokenzCYT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴36.87
CryptokenzCYT သို့ BitcoinBTC0.000117 CryptokenzCYT သို့ EthereumETH0.00351 CryptokenzCYT သို့ LitecoinLTC0.0248 CryptokenzCYT သို့ DigitalCashDASH0.0149 CryptokenzCYT သို့ MoneroXMR0.0151 CryptokenzCYT သို့ NxtNXT105.22 CryptokenzCYT သို့ Ethereum ClassicETC0.199 CryptokenzCYT သို့ DogecoinDOGE389.29 CryptokenzCYT သို့ ZCashZEC0.0164 CryptokenzCYT သို့ BitsharesBTS41.56 CryptokenzCYT သို့ DigiByteDGB43.16 CryptokenzCYT သို့ RippleXRP4.79 CryptokenzCYT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0465 CryptokenzCYT သို့ PeerCoinPPC4.48 CryptokenzCYT သို့ CraigsCoinCRAIG614.66 CryptokenzCYT သို့ BitstakeXBS57.53 CryptokenzCYT သို့ PayCoinXPY23.55 CryptokenzCYT သို့ ProsperCoinPRC169.26 CryptokenzCYT သို့ YbCoinYBC0.000725 CryptokenzCYT သို့ DarkKushDANK432.92 CryptokenzCYT သို့ GiveCoinGIVE2921.82 CryptokenzCYT သို့ KoboCoinKOBO307.34 CryptokenzCYT သို့ DarkTokenDT1.24 CryptokenzCYT သို့ CETUS CoinCETI3896.32